भूकम्पको तीन वर्ष पुरा, पीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ !
दोलखा, वैशाख १२ः भूकम्पबाट अतिप्रभावित दोलखामा जिल्लामा हालसम्म सरकारी कार्यालय र निजी निवास गरी ३० हजार १०४ घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले दोलखाको सदरमुकामका केही पक्की घरबाहेक सबै भौतिक संरचना पूर्णरुपमा नष्ट भएका थिए जसको निर्माण कार्य तीव्ररुपमा अगाडि बढ्दा हालसम्म सो संख्यमा घर निर्माण भइसकेका हुन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख सागर आचार्यका अनुसार पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा ३६६ विद्यालय निर्माण गर्नुपर्नेमा ३०० वटा निर्माण भइरहेका छन् भने ५६ वटा विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
स्वास्थ्य चौकी ३७ वटा निर्माण गर्नुपर्नेमा ३१ वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ भने छवटा निर्माण गर्न बाँकी छ । ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा २१ वटाको निर्माण कार्य भइरहेको छ । आचार्यले भने, “दोलखाको पुनःनिर्माणको काम एकदमै राम्रोसँग अघि बढेको छ, यही तरिकाले काम भएमा एक वर्षमा पूर्णरुपमा पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ ।” सो कार्यालयका अनुसार निजी आवास निर्माणमा दोस्रो किस्ता ४० हजार ३४३ ले लिइसकेका छन् । तेस्रो किस्ताका लागि १९ हजार ७७६ ले सिफारिस गरेका छन् ।
पुनःनिर्माणका लािग ९६ प्रतिशत अनुदान सम्झौतासमेत भइसकेको छ । दोलखामा भूकम्पका कारण १७७ जनाको मृत्यु, ६६२ जना पूर्णरुपमा घाइते तथा १३ जना बेपत्ता भएका थिए । भूकम्पलगत्तै गएको इञ्जिनियरको टोलीले घरघरमा गएर पूर्णरुपमा नष्ट भएका आवास ५५ हजार ६९४ क्षति भएको र आंशिकरुपमा एक हजार ५०६ क्षति भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर पीडितको गुनासोपछि लाभदायी संख्या ६२ हजार ८३३ पुगेको छ । भौतिक संरचनामा सरकारी कार्यालय छवटा, ३६३ वटा विद्यालय, ४५ स्वास्थ्य चौकी, १८ कृषि तथा पशु कार्यालय, हुलाक १०, प्रहरी चौकी १८ वटा क्षति भएको थियो ।
सबै गरी जिल्लामा रु ५० अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । भूकम्प पीडितलाई सरकारले राहतस्वरुप अस्थायी आवासका लागि रु १५ हजार र न्यानोका कपडाका लागि रु १० हजार शुरुमा प्रदान गरेको थियो । आवास निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत रु तीन लाख दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार पुनःनिर्माणको काम अघि बढेको छ । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डवल पाण्डेका अनुसार पुनःनिर्माणको काम तिव्रगतिमा अघि बढेको छ । सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन र निजी निवास पनि तीव्ररुपमा निर्माण भइरहेका छन् । लाभग्राहीले अनुदान लिने प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
समितिका प्रमुख पाण्डेले थपे, “सरकारी तथा निजी आवास निर्माणको पुनः सर्वेक्षण र पुनः जाँच भएका छन्, गुनासोलाई छिटो सम्बोधन भएको छ, भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामध्ये दोलखामा निकै रफ्तारमा काम अघि बढेको छ ।” भूकम्प आउने बित्तिकै पीडितले आफ्नो जमिन भएको जुनसुकै ठाउँमा पनि घर बनाउन पाउने व्यवस्था थियो तर अहिले जुन ठाउँमा घर थियो त्यही ठाउँमा मात्र घर बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले दोलखाको बोसिम्पा र जिलुका बस्ती एकीकृत बस्तीका रुपमा बसाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
पुराना बसिरहेका बस्ती जोखिमयुक्त स्थानमा भएको हुँदा एकीकृत रुपमा सरकारले बस्ती सार्ने तयारी गरेको हो । पुनःनिर्माण गर्दा ग्रामीण आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अति ठूला घर भने निर्माण भएका छैनन् । प्रायः दुई कोठाका घर निर्माण भएका छन् । यसकारण ग्रामीण बस्तीमा खाना पकाउने कोठा, दाउरा घाँस राख्ने, बाख्रा, कुखुरा पाल्ने आदिजस्ता ठाउँ आफँैले बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
दोलखाको विगु गाउँपालिकाको वडा नं २ र ३ ओराङ र बुलुङमा ८५ प्रतिशत निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । दुई गाविसमा १,४०० घर बनाउनुपर्नेमा १,३०० घर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । एकै प्रकारले निर्माण गरेका ती घर छिट्टै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ । सो निजी निवास निर्माणको जिम्मा गैरसरकारी संस्था कालीदास नेपालले लिएको हो भने सबै घरहरु उस्तै प्रकृतिका निर्माण गरेको छ ।
समितिका प्रमुख पाण्डेका अनुसार, “दोलखामा सरकारीभन्दा गैरसरकारी संस्थाको पहलमा निर्माण भएका घर छिटो निर्माण भएका छन् किनभने उनीहरुको आफ्नै प्राविधिक हुन्छ । कतिपय ठाउँमा सरकारी प्राविधिकले समयमै प्राविधिक परीक्षण नगर्दा पनि काममा ढिलाइ भएको छ ।”
दोलखामा पुनःनिर्माणमा दुई हजार ५०० भन्दा बढी घर गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरिरहेका छन् जसमा सरकारीको तुलनामा निकै तीव्ररुपमा काम अघि बढेको छ । दोलखामा पुनःनिर्माणका लागि छुटेका १० हजार पीडितको गुनासो परेको छ । गुनासो दर्ताका लागि यही महिनाभरिसम्मका लागि खुल्ला गरिएको थियो ।
धरहरा जतिसक्दो चाँडो निर्माण हुन्छः प्रम ओली
काठमाडौँ, बैशाख १२ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले धरहरा निर्माणलाई सक्दो चाँडो अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
विसं २०७२ को वैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट पीडितको स्मृतिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सुन्धारास्थित भत्किएको धरहराको प्रांगणमा आयोजित ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुहुँदै सो कुरा बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अब देश समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढेको बताउँदै धरहरा निर्माणसँगै भूकम्पपछिको नवनिर्माण र पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न सबैसँग अपिल गरे ।
“हाम्रो कलात्मकता र सुन्दरतालाई कायम राख्दै पुरानै शैलीमा, भूकम्प आउँदा पनि नभत्किने बलियो धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप तथा वसन्तपुरका सांस्कृतिक संरचनालगायत अन्य संरचना निर्माणमा सरकार जुटेको छ”– प्रधानमन्त्री ओलीले भने । आगामी दिनमा सरकारले सत्ताभन्दा पनि जनता बलियो हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा समृद्धिवाद आउँदैछ भने ।
सोही अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँका भत्किएका घरको पुनःनिर्माणसँगै पुराना घरसमेत भत्काउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा मन्त्रीहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । २०७२ वैशाखमा आजकै दिन गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण ३१ जिल्लामध्ये १४ जिल्ला अतिप्रभावित बनेका थिए ।
वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछि गएका पराकम्पका कारण आठ हजार ९७९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए । भूकम्पका कारण करीब रु सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो ।
म चितवन रिल्याक्स गर्न आएको होइनः प्रचण्ड
चितवन, वैशाख १२ः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले आफू चितवन ुरिल्याक्सु गर्नका लागि मात्र नआएको बताएका छन् ।
प्रेस सेन्टरले चितवनको विकास र समृद्धिका बारेमा राखेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले चितवनको विकासका लागि नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिरहेको बताए । चितवनलाई नमूना विकासको जिल्ला बनाउने अभियानमा आफू रहेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रले चितवनको विकासबाट सिक्न सक्ने गरी काम गरिने बताए ।
चितवनलाई पर्यटन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको हव बनाउन सकिने उनको तर्क छ । उनले जिल्लामा रहेका नदी, राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जिल्लामा के आवश्यक छ भन्ने विषयमा आफूले चासोका साथ हेरिरहेको पनि उनले जानकारी गराए।
​राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. कँडेल
2018-04-24 डिजिटल दैनिक Leaveacomment
काठमाडौं, वैशाख ११ः सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा.पुष्प कँडेललाई नियुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकले आयोग सदस्यमा भने डा.कृष्णप्रसाद ओली, प्रा.उषा ठाकुर, दिलबहादुर गुरुङ, इ. सुशील भट्ट, मीनबहादुर शाही र रामकुमार फुयाँललाई नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
काठमाडौं, वैशाख ११: आज वैशाख ११ गते, लोकतन्त्र दिवसको सम्झना गरिँदैछ । २०६२ ६३ जनआन्दोलन सफल भई २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा आज लोकतन्त्र दिवस मनाईँदैछ ।
२०६३ साल वैशाख ११ गते राति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गर्नुभएको थियो । पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।
जनआन्दोलनमा कमाण्डर समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको चुनाव गराएको थियो । संविधानसभाको २०६५ साल जेठ १५ गतेको बैठकले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनाएको थियो । वैशाख ११ गतेको जगमा देशमा ठूला परिवर्तन भएपनि यो दिन बिरानो बन्दै गएको छ । यो विशेष दिनलाई सरकार र राजनीतिक दलले पनि बिर्सिएको भान हुन थालेको छ ।
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुक्दा नागरिकका सपना अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका नेतालाई नजरबन्दमा राखेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि दुई ध्रुवमा रहेका संसद्वादी दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ।
दुई शक्तिका बीचमा भएको यो समझदारीलाई वैशाख ११ गतेले नै अनुमोदन गरेको थियो । नयाँ संविधान अनुसार तीनै तहको चुनाव भैसकेकाल अब देशमा स्थायीत्व र विकास हुने नागरिकको अपेक्षा छ ।
एमाले-माओवादीको संयुक्त कार्यक्रममा तनाव
काठमाडौँ, बैशाख ९ः एमाले र माओवादीका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले संयुक्त सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा तनावको स्थिती सिर्जना भएको छ ।
माओवादीका कार्यकर्ताले संयुक्त सम्बोधनका लागि तयार पारिएको ब्यानरमा असहमति जनाउदै हो हल्ला हल्ला गरेपछि तनाव भएको हो ।
कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा केही समय पहिले माओवादीको भातृ संगठनले आपत्ती जनाएका थिए ।
ब्यानरमा माओवादी केन्द्रलाई ‘माके’ लेखिएको भन्दै आफ्नो पार्टीको अपमान गरिएको भन्दै कार्यक्रम शुरु हुन अघि उनी मञ्चमा गएर सम्बोधन गरेपछि माओवादी कार्यकर्ताहरुले त्यसमा समर्थन जनाउँदै हुटिङ गरेका थिए ।
यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत शीर्ष नेताहरु मञ्चमा आइपुगेका थिएनन् । त्यसपछि ब्यानरलाई त्यहाँबाट हटाएर उल्टो पारेर राखेपछि मात्र माओवादी कार्यकर्ताहरु शान्त बनेका थिए ।
सेमरकको बार्षिक उत्सव: भाइवहिनीको प्रस्तुतीमा झुमे अभिभावहरु
काठमाडौं, वैशाख ९ः कमलपोखरी स्थित सेमरक श्रीयन्त्र प्रि–स्कुल ले एक कार्यक्रमका बीच आफ्नो चौथो बार्षिक उत्सव मनाएको छ ।
राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थीले गीत, नाटक, नृत्य लगाएतका बिभिन्न सांस्कृतीक कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेका थिए । कक्षा नर्सरी र प्लेगुप्रका स–सना भाइवहिनीहरुले प्रस्तुत गरेको स्वागत नृत्य, राइम्स लगायतका प्रस्तुतीलाई अभिभावकले निकै मनपराए ।
आफ्ना छोराछोरी स्टेजमा बढो आत्मविश्वासले प्रस्तुती दिईरहेको देख्दा अभिभावहरु दंग र खुशी देखिन्थे । कक्षा यु.केजी.का विद्यार्थीहरुलाई गरिएको दिक्षान्त समारोहले कार्यक्रम लाई थप रोचक बनाएको थियो ।
बिद्यार्थीहरुको शैक्षिक, सृजनात्मक र नेतृत्व विकासकोे अभिवृद्धि नै कार्यक्रम आयोजनाको मुल उद्देश्य रहेको बिद्यालयकी सञ्चालीका सिमा उपाध्यालले बताईन् ।
कांग्रेस बैठकः पदाधिकारी प्रस्तावको सम्भावना कम
काठमाडौं, बैशाख ९ः काँग्रेसको स्थगित केन्द्रीय समितिको बैठक आज पुन बस्दैछ ।
बैठकमा सभापति शेर बहादुर देउवाले पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव लैजाने भनिएपनि आज त्यसको सम्भावना नभएको एक नेताले जानकारी दिए । समीक्षा बैठकको अन्तिम चरणमा सभापतिले पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव लैजाने बताईएको छ ।
यसैवीच उपसभापतिका आकांक्षी विजय गच्छदारलाई विधानले उपसभापति बन्नबाट रोक्ने भएको छ । महाधिवेशनबाट विजयी केन्द्रीय सदस्य मनोनित पदाधिकारी बन्न योग्य हुनेहुँदा उनको सम्भावना नरहेको बताइएको छ । यसैबीच २२ यूवा केन्द्रीय सदस्यहरूले संयुक्त पेश गर्न लागेको प्रस्तावले अन्तिम रुप पाएको बताइएको छ ।
चैत ९ देखि निर्वाचन समीक्षाको लागि डाकिएको काँग्रेस बैठक नेता खुमबहादुर खड्काको निधनछि चैत १७ देखि रोकिएको थियो ।
आज राति उल्का वर्षाको रमाइलो दृश्य देख्न सकिने
काठमाडौं, वैशाख ९ः आइतबार राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षाको रमाइलो दृश्य देख्न सकिने भएको छ ।
वैैशाख ५ देखि सक्रिय भएको विणा उल्का वर्षा (लाइरिड मिटियोर सावर) आउँदो बुधबारसम्म सक्रिय रहने खगोलविदले बताएका छन् । आइतबार राति १ बजेदेखि सुर्योदय हुँदासम्म उल्का वर्षा भएको हेर्न र देख्न सकिनेछ । खगोलविद् सुरेश भट्टराईका अनुसार अत्यधिक सक्रियताको समयमा प्रतिघन्टा १५ देखि २० वटा उल्का खसेको देख्न सकिनेछ ।
थ्याचर नामक पुछ्रेताराले छोडेका धुलाका कणहरु पृथ्वीको वायुमण्डलमा घर्षण भई जलेर नस्ट हुँदा यो उल्का वर्षा देखिने गरेको उनले बताए । थ्याचर पुछ्रेताराले सूर्यको एक परिक्रमा लगाउन ४ सय १५ वर्ष लगाउँछ । पुछ्रेतारा वा धुम्केतुहरुले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा आफ्नो कक्षमा धूलाका कणहरु छोड्ने गर्छन जुन लाखौँ किलो मिटरसम्म फैलिन सक्छन् ।
यसरी फैलिएका धुलाका कणहरुले सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ । परिक्रमा गर्ने क्रममा जब यी धूलाका कणहरु पृथ्वीको वायुमण्डलमा ठोकिन्छन तब उल्का देखिन्छ । यदि यस्तो दृश्यमा १० वा यो भन्दा बढी उल्का देखिएमा त्यस्तो घटनालाई उल्का वर्षा भन्ने गरिन्छ ।